Dorian, Imelda, iyo Inbadan - Gargaarka Musiibada ee Gargaarka Wadajirka ah
Bogga ugu weyn/updates/Dorian, Imelda, iyo inbadan
Kaliya waxaan rabay inaan idin cusboonaysiino oo ku saabsan qaar ka mid ah howlaheedii ugu dambeeyay.
Bishii Sebtembar 1, Hurricane Dorian, oo ah nooca duufaanta '5', ayaa hoos u dhigay dhammaan bulshooyinka jasiiradaha Waqooyiga Bahamas ee Grand Bahama iyo Abaco. Ka dib markii uu istaagay Bahamas, Dorian wuxuu ku sii socday wado burburin ah, wuxuu xoqeynayaa xeebta koonfur-bari ee Mareykanka, wuxuuna sababay daadad iyo duufaano xeebta, gaar ahaan Xeebta Waqooyiga Carolina.
Annaga oo kaashanayna shuraakada bulshada, waxaan bilownay a khadka tooska ah ee madax-bannaan si ay ugu fududaato sahayda loogu talagalay bulshooyinka saamaynta ku yeeshay. Xarumaha aruurinta ayaa si dhakhso leh loogu horumariyey koonfurta-bari waxayna hadda sii wadayaan aqbalaadda tabarucaadka meelaha saamaynta ku leh iyo bulshooyinka. Fadlan tixgelin ku tabarucida agabyada xarun aruurinta kuugu dhow.
Si aad wax uga sii ogaato waxa aan ugu yeernay Khadka Khadka Jawaabta ee Madaxbanaan ee Dorian, guji halkan faahfaahinta, ay kujirto goobaha saxda ah ee xarumaha aruurinta tabaruca. Sidoo kale, fadlan noogu soo dir emaylka at [emailka waa la ilaaliyay] hadaad xiisaynayso bilaabida xarun tabaruc ururinta bulshadaada.
Florida gudaheeda, dadaalkayagu wuxuu diirada saaray helitaanka sahayda Bahamas iyo taageerida Bahamiyiinta masaafurin.
Waqooyiga Carolina, waxaan ku hawlannahay qaybinta sahayda iyo dadaallada nadiifinta bulshada. Bangiyada Outer-ka waxaan ka shaqeynay si aan u caawino Matxafka Taariikhda Mareykanka ee Frisco, oo daadadku ku fataheen, isla markaana sameeyay caaryo badan. Matxafka ayaa ah uruurin aad u yar oo aan faa'iido-doon ahayn, oo ay ku xardhan yihiin lammaaneyaal ku jira 80s-kii kuwaas oo sannado badan joogay. Nasiib darrose, mid ka mid ah aasaasayaashaas wuxuu dhintay maalmo ka hor duufaanta, iyo carmalkiisa hadda waxay haysataa shaqo aad u badan oo ay ka qaban karto xaaladdeeda murugada, taas oo hadda isku urursan. Tabaruciinta ayaa awood u yeeshay inay ka caawiyaan nadiifinta, hagaajinta, roogagga rooga, iyo hagaajinta caaryada, iyo gaar ahaan xallinta caaryada kuwa da'da weyn, dhaqan ahaanna muhiim u ah, marar badan oo muqadas ah, alaabada lagu qabtay aruurinta halkaas. Markii lagu riixay in dib loo furo, wali waxaa jira shaqo badan oo ay tahay in la qabto, inbadan oo ka mid ah farshaxanadaas ayaa loo raraa kaydinta halkaas oo ay uga sii baahnaan doonaan dib-u-hagaajin iyo feejignaan. Tani waxay noqon doontaa shaqo socota oo matxafku aad u jecel yahay in laga caawiyo gudaha.
Fiiri wareysigii dhowaa ee aan la sameynay 'Act Out'! ku saabsan dadaalladaas iyo kaalmooyinka wadaagga ah guud ahaan halkan.
Imelda waxay sababtay daadad baahsan oo ka dhacay Bariga Texas, oo ay ku jiraan beello badan oo ku soo fatahay daadad ka dhashay Hurricane Harvey, laba sano ka hor. Asxaabteena at Soo-kabashada West Street iyo Bayou Action Street Health ayaa durbaba bilaabay abaabulid. Faa'iidooyinka ay leedahay in degmo la ahaado, halkii laga noqon lahaa heer qaran, ayaa ah in ururradan ay ku sii hayn karaan xiriirkooda aaggooda si aan rasmi ahayn. Tixgeli inaad ku deeqdo halkan iyo halkan. Sidii had iyo jeerba, dadka waaweyni wax bay noo tabaruci karaan oo waxay heli karaan ururada iskaashatada iyo kooxaha xiriirka si ay ugu tabarucaan websaydhkeena MutualAidDisasterRelief.org/donate
Xeebta galbeed, dadka waaweyni waxay isku diyaarinayaan xilliyada dabka iyaga oo abaabulaya tabobarro iyo xirfad farsamo.
Ka sokow fursadaha tabaruca ee korka ku yaal, waxaan sidoo kale isku deyeynaa inaanu helno koox mutadawiciin ah oo ka soo qeybgalaya Oglala Lakota Initiative Revitalization Dhaqanka ee Pine Ridge ka hor jiilaalka, si looga caawiyo qaar ka mid ah mashaariicda dhismaha. Haddii aad xiisaynayso inaad gacan ka geysato mid ka mid ah dadaalladan, fadlan gaadhsii.
Ugu dambeyntiina, Mutual Aid Musiibo Relief wuxuu ku faraxsan yahay inuu ku dhawaaqo in kooxdeena tababarka ay leeyihiin aqoon-is-weydaarsiyo dheeri ah oo ka yimaada Waqooyi-bari. Dadku waxay eegi karaan faahfaahinta halkan.
Jacaylka iyo wadajirka,